Qaraxyo Baabuur Loo Adeegsaday oo Muqdisho ka Dhacay (Sawiro) | SAHAN ONLINE
Qaraxyo Baabuur Loo Adeegsaday oo Muqdisho ka Dhacay (Sawiro)
MUQDISHO:-Labo qarax oo loo adeegsaday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray Hotel weheliye oo ku yaal Wadada Maka Almukarama iyo xero Ciidamo oo ku taala Warshada Nacnac ee Xaafada Wadajir ee Muqdisho.
Ugu yaraa Lix qof ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen Qaraxyadaas, waxaana ku dhaawacmay tiro intaas ka bandan ,iyadoo dadka dhaawacmay la dhigay cusbitaaladda magaaladda muqdisho.
Afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax cumar Xalane ayaa xaqiijiyay dhimashada shanta qof, waxaana uu sheegay in Mid ka mid ah qaraxyada oo loo adeegsaday baabuur uu ka dhacay albaabka hore ee Hotel Wehliye, oo ku yaalla waddada mashquulka badan ee Maka al-Mukarama.
Taliyaha ciidamada booliiska ee qeybta Waliyow Cadde, gaashaanle sare Maxamed Daahir ayaa VOA u sheegay in qaraxa ka dhacay hotel weheliye loo adeegsaday gaari nooca Noha looga yaqaan magaalada Muqdisho.
Gees kale, qarax labaad ayaa loo adeegsaday baabuur nooca rakaabka ee Hoomey looga yaqaan Muqdisho, waxaana ku dhintay hal qof, halka saddex qof oo kalena ay ku dhaawcameen.Qaraxan ayaa ka dhacay meel ku dhow xero ciidamada lagu tababaro oo ku dhow warshaddii Nacnaca, kuna taalla degmada Wadajir.